Ukubonwa kweMibhalo Eyengeziwe
IBizo leKhasi leNcwadi kaMormoni
Ngalokho-ke, kungokufingqiwe kwemibhalo yabantu bakwaNefi, futhi ngokunjalo neyamaLamani—Yabhalelwa amaLamani, ayinsali yendlu ka-Israyeli; futhi ngokunjalo nakumJuda kanye nakoweZizwe—Yabhalwa ngendlela yokuyala, futhi ngokunjalo nangomoya wokuphrofetha kanye nowokwambulelwa—Yabhalwa futhi yavalwa, yafihlwa eNkosini, ukuze ingonakaliswa—Ukuze iphume ngesipho kanye nangamandla kaNkulunkulu mhla ihunyushwa—Yavalwa ngesandla sikaMoroni, futhi yafihlwa eNkosini, ukuze iphume ngesikhathi esifanelekile ngendlela yoweZizwe—Ukuhunyushwa kwayo ngesipho sikaNkulunkulu.
INcwadi kaMormoni ingumqingo wemibhalo engcwele eqhathaniswa neBhayibheli. Iwumbhalo wezenzo zikaNkulunkulu kubantu base ndulo ababe hlala eMelika futhi iqukethe elipheleleyo ivangeli laphakade.
UbuFakazi boFakazi abaThathu
Makwazeke kuzo zonke izizwe, izihlobo, izilimi, kanye nakubantu, lomsebenzi oyofika kubo: Ukuthi thina, ngomusa kaNkulunkulu uBaba, kanye neNkosi yethu uJesu Kristu, sizibonile izingcwephe eziqukethe lombhalo, okungumbhalo wabantu bakwaNefi, futhi ngokunjalo nowamaLamani, abafowabo, futhi ngokunjalo nowabantu baJarede, abaqhamuka embhoshongweni osekukhulunywe ngawo. Futhi siyazi ukuthi zihunyushwe ngesipho kanye nangamandla kaNkulunkulu, ngokuba izwi lakhe likushilo lokho kithi; ngalokho-ke sazi kahle ukuthi lomsebenzi uliqiniso. Futhi siyafakaza ukuthi siyibonile imifanekiso eqoshiwe esezingcwepheni; futhi sivezelwe yona ngamandla kaNkulunkulu, hhayi omuntu. Futhi siyaqinisa ngamazwi anesizotha, ukuthi ingelosi kaNkulunkulu yehla ivela ezulwini, futhi yaziletha futhi yazibeka phambi kwamehlo ethu, ukuze sizibuke futhi sizibone izingcwephe, kanye nemifanekiso eqoshiwe eyayikuzo; futhi siyazi ukuthi kungomusa kaNkulunkulu uBaba, kanye neNkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi sizibone futhi sinikeza ubufakazi ukuthi lezi zinto ziliqiniso. Futhi kuyamangalisa emehlweni ethu. Nokho, izwi leNkosi lasiyala ukuthi sinikeze ubufakazi bakho; ngalokho-ke, ukulalela imiyalelo kaNkulunkulu, sinikeza ubufakazi ngalezi zinto. Futhi siyazi ukuthi uma sethembekile kuKristu, siyolisusa igazi labo bonke abantu ezingutsheni zethu, futhi sitholwe singenabala phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, futhi siyohlala naye ingunaphakade emazulwini. Futhi udumo malube kuBaba, kanye nakuNdodana, kanye nakuMoya oyiNgcwele, okunguNkulunkulu munye. Amen.
UbuFakazi boFakazi abayisiShiyagalombili
Makwazeke kuzo zonke izizwe, izihlobo, izilimi, kanye nakubantu, lomsebenzi oyofika kubo: Ukuthi uJoseph Smith, omNcane, umhumushi walomsebenzi, usibonisile izingcwephe lezo osekukhulunywe ngazo, ezinesimo segolide; futhi amaningi amakhasi lo Smith oshiwo awahumusha nempela sawaphatha ngezethu izandla; futhi phezu kwalokho sayibona imifanekiso eqoshiwe lapho; yonke enesimo somsebenzi wasendulo, futhi owenziwe ngobuciko. Futhi ngalokhu sinikeza ubufakazi ngamazwi anesizotha, ukuthi uSmith oshiwo waziveza kithi, ngokuba sazibona futhi saziphakamisa, futhi sazi ngempela ukuthi uSmith oshiwo unazo lezo zingcwephe esikhulume ngazo. Futhi sinika amagama ethu emhlabeni, ukufakaza emhlabeni ngalokho esikubonile. Futhi asiqambi manga, uNkulunkulu ubunikile ubufakazi bakho.
UbuFakazi bomPhrofethi uJoseph Smith
Amazwi omPhrofethi uJoseph Smith uqobo ngokuvela kweNcwadi kaMormoni yilawa:
INcazelo eMfishane ngeNcwadi kaMormoni
INcwadi kaMormoni ingumbhalo ongcwele wabantu base Melika yasendulo futhi wawuqoshwe emakhasini ensimbi. Imithombo okuthathwe kuyo lombhalo yilena:
UNefi uqala umbhalo wabantu bakubo—ULehi ubona esibonakalisweni insika yomlilo futhi ufunda encwadini yeziphrofetho—Udumisa uNkulunkulu, ubikezela ukuza kukaMesiya, futhi uphrofetha ngokubhujiswa kweJerusalema—Uzingelwa ngamaJuda. Cishe ngonyaka wama 600 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi uthatha umndeni wakhe uya ehlane ngasoLwandle oluBomvu—Bashiya impahla yabo—ULehi unikela ngomhlatshelo eNkosini futhi ufundisa amadodana akhe ukuthi agcine imiyalelo—ULamani noLemuweli bavungamela uyise—UNefi uyalalela futhi uthandaza ngokukholwa; iNkosi ikhuluma kuye, futhi ukhethwa ukuthi abuse phezu kwabafowabo. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amadodana kaLehi abuyela eJerusalema ukuyolanda izingcwephe zethusi—ULabani wenqaba ukuzidela izingcwephe—UNefi uyabayala futhi uyabakhuthaza abafowabo—ULabani untshontsha impahla yabo futhi uzama ukubabulala—ULamani noLemuweli bashaya uNefi noSamu futhi basolwa yingelosi—Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi ubulala uLabani ngokuyalwa yiNkosi futhi emuva kwalokho uthola izingcwephe zethusi ngecebo lokuhlakanipha—UZoramu ukhetha ukuhlangana nomndeni kaLehi ehlane. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
USariya ukhononda kuLehi—Bobabili bajabulela ukubuya kwamadodana abo—Benza iminikelo—Izingcwephe zethusi ziqukethe imibhalo kaMose nabaphrofethi—Izingcwephe zikhomba ukuthi uLehi uwuzalo lukaJosefa—ULehi uphrofetha mayelana nenzalo yakhe kanye nokulondolozwa kwezingcwephe. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi ubhala ngezinto zikaNkulunkulu—Injongo kaNefi wukuvumisa abantu ukuthi beze kuNkulunkulu ka-Abrahama futhi basindiswe. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amadodana kaLehi abuyela eJerusalema futhi amema u-Ishmayeli kanye nomuzi wakhe ukuthi ahambe nabo ohambweni lwabo—ULamani kanye nabanye bayahlubuka—UNefi unxusa abafowabo ukuthi babe nokholo eNkosini—Bambopha ngezintambo futhi benza isu lokumbulala—Ukhululwa ngamandla okholo—Abafowabo bacela intethelelo—ULehi kanye nalabo ayenabo banikela ngeminikelo kanye nemihlatshelo yokushiswa. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi ubona umbono womuthi wokuphila—Udla isithelo sawo futhi ufisa umndeni wakhe ukuthi nawo wenze njalo—Ubona induku yensimbi, indlela eminyene nengumcingo, kanye nenkungu yobumnyama egubuzela abantu—USariya, uNefi, kanye noSamu badla isithelo, kodwa uLamani noLemuweli bayenqaba. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi wenza amaqoqo amabili emibhalo—Ngalinye libizwa ngokuthi yizingcwephe zikaNefi—Izingcwephe ezinkulu ziqukethe umlando wezwe; ezincane zona ziphathelene ikakhulukazi nezinto ezingcwele. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi ubikezela ukuthi amaJuda azothunjwa ngabaseBabiloni—Wazisa ngokufika phakathi kwamaJuda kukaMesiya, umSindisi, uMkhululi—ULehi wazisa futhi ngokuza kwalowo okuzofanele abhabhadise iMvana kaNkulunkulu—ULehi wazisa ngokufa kanye nokuvuka kukaMesiya—Uqhathanisa ukuhlakazeka kanye nokuqoqwa kuka-Israyeli nesihlahla somnqumo—UNefi ukhuluma ngeNdodana kaNkulunkulu, ngesipho sikaMoya oyiNgcwele, kanye nangesidingo sokulunga. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi ubona uMoya weNkosi futhi ukhonjiswa embonweni umuthi wokuphila—Ubona unina weNdodana kaNkulunkulu futhi ufunda ngokuzehlisa kukaNkulunkulu—Ubona ukubhabhadiswa, ubufundisi, kanye nokubethelwa kweMvana kaNkulunkulu—Ubona ukubizwa ngokunjalo nobufundisi babaPhostoli abayiShumi namBili beMvana. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi ubona embonweni izwe lesethembiso; ukulunga, ububi, kanye nokuwa kwabahlala kulo; ukufika kweMvana kaNkulunkulu phakathi kwabo; nokuthi abaFundi abayiShumi namBili kanye nabaPhostoli abayiShumi namBili bayomahlulela kanjani u-Israyeli; kanye nokunengeka kanye nokungcola kwesimo salabo abancishelwe wukholo. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi ubona embonweni ibandla likadeveli limiswe phakathi kwabeZizwe, ukutholwa kanye nokwakha eMelika, ukulahleka kwezinxenye eziningi ezisobala kanye neziyigugu zeBhayibheli, isimo somphumela wokuhlubuka kwabezizwe, ukubuyiselwa kwevangeli, ukuvela kwemibhalo engcwele yezinsuku zokugcina, kanye nokwakhiwa kweSiyoni. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ingelosi itshela uNefi ngezibusiso nangeziqalekiso ezizowela phezu kwabeZizwe—Mabili kuphela amabandla: IBandla leMvana kaNkulunkulu kanye nebandla likadeveli—Abangcwele baNkulunkulu kuzo zonke izizwe bahlushwa yilo lelibandla elikhulu nelinengekile—UmPhostoli uJohane uyobhala maqondana nokuphela komhlaba. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Inzalo kaLehi kufanele ilithole kwabeZizwe ivangeli ngezinsuku zokugcina—Ukuqoqwa kuka-Israyeli kufaniswa nesihlahla somnqumo amagatsha aso emvelo ayoxhumelelwa futhi—UNefi uhumusha umbono womuthi wokuphila futhi ukhuluma ngokulunga kukaNkulunkulu ekuhlukaniseni ababi kwabalungile. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ababi bathatha iqiniso njengento enzima—Amadodana kaLehi ashada amadodakazi ka-Ishmayeli—ILiyahona iyabaqondisa endleleni yabo ehlane—Imibiko evela eNkosini ibhalwa kuyo iLiyahona izikhathi-ngezikhathi—U-Ishmayeli uyafa; umndeni wakhe uyavungama ngenxa yezinhlupheko. Cishe ngonyaka wama 600 kuya kowama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi uyalwa ukuthi akhe umkhumbi—Abafowabo bayaphikisana naye—Uyabanxusa ngokubalandisa umlando wezenzo zikaNkulunkulu ku-Israyeli—UNefi ugcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu—Abafowabo bayenqatshelwa ukuthi bamthinte, funa babune njengomhlanga owomileyo. Kwakungunyaka wama 592 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Umkhumbi uyaqedwa—Ukuzalwa kukaJakobe kanye noJosefa kuyaphathwa—Iqembu lingena emkhunjini liya ezweni lesethembiso—Amadodana ka-Ishmayeli kanye nabafazi babo bahlangana ngokuzitika nokuhlubuka—UNefi uyaboshwa, futhi umkhumbi uphindiselwa emuva yisiphepho esibi—UNefi uyakhululwa, futhi ngomthandazo wakhe isiphepho siyanqamuka—Abantu bafika ezweni lesethembiso. Cishe ngonyaka wama 591 kuya kowama 589 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi wenza izingcwephe zensimbi esatshe futhi ulanda ngomlando wabantu bakubo—UNkulunkulu ka-Israyeli uyofika eminyakeni engamakhulu ayisithupha kusukela ngesikhathi uLehi asuka eJerusalema—UNefi ukhuluma ngokuhlupheka kanye nokubethelwa Kwakhe—AmaJuda ayodelelwa futhi ahlakazwe kuze kube yizinsuku zokugcina, ngesikhathi esebuyela eNkosini. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi yembula izinhloso Zayo ku-Israyeli—U-Israyeli ukhethiwe esithandweni sezinkathazo futhi uzophuma eBabiloni—Qhathanisa no-Isaya 48. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMesiya uzokuba wukukhanya kwabeZizwe futhi uzokhulula iziboshwa—U-Israyeli uzoqoqwa ngamandla ngezinsuku zokugcina—Amakhosi azokuba ngoyise ababondlayo—Qhathanisa no-Isaya 49. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Israyeli uyohlakazwa ebusweni bonke bomhlaba—AbeZizwe bayomondla futhi bamkhulise u-Israyeli ngevangeli ezinsukwini zokugcina—U-Israyeli uyoqoqwa futhi asindiswe, ababi bayokusha njengamabibi—Umbuso kadeveli uyobhujiswa, uSathane uyoboshwa. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi uphrofetha ngezwe lenkululeko—Inzalo yakhe iyohlakazwa futhi ishaywe uma imphika oNgcwele ka-Israyeli—Unxusa amadodana akhe ukuthi agqoke izikhali zokulunga. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ukukhululwa kuza ngoMesiya oNgcwele—Inkululeko yokukhetha (ilungelo lokukhetha) iyadingeka ekuphileni kanye nakuyo inqubekela phambili—U-Adamu wawa ukuze abantu babekhona—Abantu bakhululekile ukuthi bakhethe inkululeko kanye nokuphila okuphakade. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJosefa eseGibithe wawabona amaNefi ngombono—Waphrofetha ngoJoseph Smith, umboni wezinsuku zokugcina; ngoMose, lowo owayezokhulula u-Israyeli, kanye nangokuvela kweNcwadi kaMormoni. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi weluleka futhi ubusisa isizukulwane sakhe esizayo—Uyafa futhi uyangcwatshwa—UNefi uyajabula ngobuhle bukaNkulunkulu—UNefi ubeka ithemba lakhe eNkosini ingunaphakade. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaNefi azehlukanisa namaLamani, agcina umthetho kaMose, futhi akha ithempeli—Ngenxa yokungakholwa kwawo, amaLamani ayehlukaniswa neNkosi, ayaqalekiswa, futhi aba wuhlupho kumaNefi. Cishe ngonyaka wama 588 kuya kowama 570 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe ulanda umlando wamaJuda: Ukuthunjwa kwabaseBabiloni kanye nokubuya; ubufundisi kanye nokubethelwa koNgcwele ka-Israyeli; usizo olutholakala kwabeZizwe; kanye nokubuyiselwa kwamaJuda ngezinsuku zokugcina uma sebekholwa kuMesiya. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe uyaqhubeka nokufunda ku-Isaya: U-Isaya ukhulumisa okukaMesiya—UMesiya uyoba nolimi lwabafundile—Uyonikeza umhlane Wakhe kubashayi—Akayikuthotshiswa—Qhathanisa no-Isaya 50. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe uyaqhubeka nokufunda ku-Isaya: Ngezinsuku zokugcina, iNkosi iyoyiduduza iSiyoni futhi iqoqe u-Israyeli—Labo abahlengiweyo bayokuza kuyo iSiyoni babe nokuthokoza okukhulu—Qhathanisa no-Isaya 51 kanye no 52:1–2. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe uyachaza ukuthi amaJuda ayoqoqwa kuwo wonke amazwe awo esethembiso—INhlawulo ihlenga umuntu ekuWeni—Imizimba yabafileyo iyophuma emathuneni, nemimoya yabo iphume esihogweni naseparadesi—Bayokwahlulelwa—INhlawulo isindisa ekufeni, esihogweni, kudeveli, nasenhluphekweni engapheliyo—Abalungile bayosindiswa embusweni kaNkulunkulu—Izijeziso zezono zibekwa obala—ONgcwele ka-Israyeli ungumgcini wesango. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe uyachaza ukuthi amaJuda ayombethela uNkulunkulu wawo—Ayohlakazwa aze aqale ukukholwa Kuye—IMelika iyokuba yizwe lenkululeko lapho kungayikuba bikho nkosi eyobusa—Buyisanani noNkulunkulu futhi nizuze insindiso ngesihawu Sakhe. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe wambona uMkhululi wakhe—Umthetho kaMose ufaniswa noKristu futhi uqinisekisa ukuthi Yena uzofika. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Isaya ubona ithempeli lezinsuku zokugcina, ukuqoqwa kuka-Israyeli, kanye nokwahlulelwa nokuthula kweminyaka eyinkulungwane—Abaziphakamisayo kanye nababi bazothotshiswa ngokuZa kwesiBili—Qhathanisa no-Isaya 2. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJuda kanye neJerusalema bazojeziswa ngenxa yokungalaleli kwabo—INkosi iyabacelela futhi iyabahlulela abantu Bayo—Amadodakazi aseSiyoni ayaqalekiswa futhi ayahlushwa ngenxa yokuthanda kwawo umhlaba—Qhathanisa no-Isaya 3. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ISiyoni kanye namadodakazi ayo azokhululwa futhi ahlanzwe ngosuku lweminyaka eyinkulungwane—Qhathanisa no-Isaya 4. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Isivini seNkosi (u-Israyeli) sizochithwa, futhi abantu Bakhe bazohlakazwa—Izinsizi zizoba phezu kwabo esimweni sabo sokuhlubuka kanye nokuhlakazwa—INkosi izophakamisa isibonakaliso iqoqe u-Israyeli—Qhathanisa no-Isaya 5. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Isaya ubona iNkosi—Izono zika-Isaya ziyathethelelwa—Ubizelwa ukuthi aphrofethe—Uphrofetha ngokuphikwa kwezimfundiso zikaKristu ngamaJuda—Insalela izobuya—Qhathanisa no-Isaya 6. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Efrayimi kanye neSiriya balwa noJuda—UKristu uzozalwa yintombi—Qhathanisa no-Isaya 7. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKristu uzokuba njengetshe lesikhubekiso kanye nedwala lesinengiso—Funani iNkosi, hhayi abathakathi abalunguzayo—Phendukelani emthethweni kanye nasebufakazini ukuze nithole ukuqondiswa—Qhathanisa no-Isaya 8. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Isaya ukhulumisa okukaMesiya—Abantu abasebumnyameni bazobona ukukhanya okukhulu—Sizalelwe umntwana—Uzokuba yiNkosi yokuThula futhi uzobusa esihlalweni sikaDavide—Qhathanisa no-Isaya 9. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ukubhujiswa kwe-Asiriya kuwuhlobo lokubhujiswa kwababi ngokuZa kwesiBili—Bayidlanzana abantu abazobe besele emva kokuthi iNkosi isiphinde yabuya—Insalela kaJakobe izobuya ngalolo suku—Qhathanisa no-Isaya 10. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Isiqu sikaJese (uKristu) siyokwahlulela ngokulunga—Ulwazi ngoNkulunkulu luyosibekela umhlaba ngeminyaka eyinkulungwane—INkosi iyophakamisa isibonakaliso futhi iqoqe u-Israyeli—Qhathanisa no-Isaya 11. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ngosuku lweminyaka eyinkulungwane bonke abantu bayoyidumisa iNkosi—Iyohlala phakathi kwabo—Qhathanisa no-Isaya 12. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ukubhujiswa kweBabiloni kuwuhlobo lokubhujiswa ngokuZa kwesiBili—Kuyokuba wusuku lwentukuthelo kanye nempindiselo—IBabiloni (umhlaba) iyokuwa ingunaphakade—Qhathanisa no-Isaya 13. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Israyeli uzoqoqwa futhi uzothokozela ukuphumula ngeminyaka eyinkulungwane—ULusifa walahlwa ngaphandle kwasezulwini ngenxa yokuhlubuka—U-Israyeli uzoyinqoba iBabiloni (umhlaba)—Qhathanisa no-Isaya 14. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi uthokoza ngalokho okusobala—Iziphrofetho zika-Isaya ziyoqondwa ngezinsuku zokugcina—AmaJuda ayobuyela eBabiloni, ambethele uMesiya, futhi ahlakazwe futhi abhaxabulwe—Ayobuyiselwa uma esekholwa kuMesiya—Uyoza okokuqala eminyakeni engamakhulu ayisithupha emva kokuba uLehi ahamba eJerusalema—AmaNefi agcina umthetho kaMose futhi akholwa kuKristu, oNgcwele ka-Israyeli. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKristu uyowafundisa amaNefi—UNefi ubona ukubhujiswa kwabantu bakhe—Bayokhuluma kusuka othulini—AbeZizwe bayokwakha amabandla amanga kanye namaqembu ayimfihlo—INkosi inqabela abantu ukuthi benze ubuphristi-mbumbulu. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ubumnyama kanye nokuhlubuka kuyosibekela umhlaba ngezinsuku zokugcina—INcwadi kaMormoni iyokwambulwa—Ofakazi abathathu bayofakaza ngalencwadi—Indoda efundile iyokuthi ayikwazi ukufunda incwadi evaliwe—INkosi iyokwenza umsebenzi omuhle kanye nomangalisayo—Qhathanisa no-Isaya 29. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amaningi amabandla amanga ayokwakhiwa ngezinsuku zokugcina—Ayofundisa amanga, ize, kanye nezimfundiso eziwubuwula—Ukuhlubuka kuyovama ngenxa yabafundisi bamanga—Udeveli uyodlanga ezinhliziyweni zabantu—Uyofundisa yonke inhlobo yezimfundiso zamanga. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abaningi beZizwe bayoyenqaba iNcwadi kaMormoni—Bayothi, Asilifuni elinye iBhayibheli—INkosi ikhuluma ezizweni eziningi—Iyokwahlulela umhlaba ngezincwadi eziyobe zibhaliwe. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AbeZizwe abaphendukile bayobalwa kanye nabantu besivumelwano—Amaningi amaLamani kanye namaJuda ayolikholwa izwi futhi athandeke—U-Israyeli uyobuyiselwa futhi ababi babhujiswe. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi uchaza ukuthi kungani uKristu abhabhadiswa—Abantu kufanele balandele uKristu, babhabhadiswe, bemukele uMoya oyiNgcwele, futhi babekezele kuze kube sekugcineni ukuze basindiswe—Ukuphenduka kanye nombhabhadiso kuyisango eliya endleleni engumngcingo nencane—Ukuphila okuphakade kuza kulabo abagcina imiyalelo emva kombhabhadiso. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Izingelosi zikhuluma ngamandla kaMoya oyiNgcwele—Abantu kufanele bathandaze futhi bathole ulwazi ngokwabo kuMoya oyiNgcwele. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amazwi kaNefi ayiqiniso—Afakaza ngoKristu—Labo abakholwa kuKristu bayowakholwa amazwi kaNefi, ayokuma njengobufakazi phambi kwesihlalo sokwahlulela. Cishe ngonyaka wama 559 kuya kowama 545 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe kanye noJosefa bafuna ukuvumisa abantu ukuthi bakholwe kuKristu futhi bagcine imiyalelo Yakhe—UNefi uyafa—Ububi buyadlanga phakathi kwamaNefi. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe usola uthando lwengcebo, ukuzikhukhumeza, kanye nokungabi msulwa—Abantu bangayifuna ingcebo ukuze basize abanye abantu—INkosi ikhipha umyalelo wokuthi akukho ndoda phakathi kwamaNefi evunyelwe ukuba nesithembu—INkosi iyathokoza ngobumsulwa babesifazane. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abamsulwa enhliziyweni bemukela izwi elithokozisayo likaNkulunkulu—Ukulunga kwamaLamani kwedlula lokho kwamaNefi—UJakobe uxwayisa ngokuhlobonga, inkanuko, kanye naso sonke isono. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Bonke abaphrofethi babekhonza uBaba egameni likaKristu—Ukunikela kuka-Abrahama ngo-Isaka kwakungumfanekiso kaNkulunkulu kanye noZelwe Yedwa Wakhe—Abantu kumele babuyisane noNkulunkulu ngeNhlawulo—AmaJuda azolenqaba itshe lesisekelo. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UJakobe ucaphuna uZenoshe maqondana nomfanekiso ngezihlahla zomnqumo ezithanjisiwe kanye nezasendle—Zifaniswa nabakwa-Israyeli kanye nabeZizwe—Ukuhlakazeka kanye nokuqoqwa kuka-Israyeli kuyabikezelwa—AmaNefi kanye namaLamani kanye nayo yonke indlu ka-Israyeli bayaphathwa—AbeZizwe bazoxhunyelelwa ku-Israyeli—Ekugcineni isivini sizoshiswa. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi izombuyisa futhi u-Israyeli ngezinsuku zokugcina—Umhlaba uzoshiswa ngomlilo—Abantu kufanele balandele uKristu ukubalekela ichibi lomlilo nesibabuli. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
USheremi uphika uKristu, uphikisana noJakobe, ufuna isibonakaliso, futhi ushaywa nguNkulunkulu—Bonke abaphrofethi bakhuluma ngoKristu kanye nangenhlawulo Yakhe—AmaNefi aphila izinsuku zawo njengabazulazulayo, bazalelwa ekuhluphekeni, futhi bazondwa ngamaLamani. Cishe ngonyaka wama 544 kuya kowama 421 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Enoshe uthandaza kakhulu futhi uthola ukuthethelelwa kwezono zakhe—Izwi leNkosi lifika emqondweni wakhe, lithembisa insindiso yamaLamani ngosuku oluzayo—AmaNefi afuna ukuwaguqula amaLamani—U-Enoshe uthokoza kumSindisi wakhe. Cishe ngonyaka wama 420 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaNefi agcina umthetho kaMose, abheka phambili ekuzeni kukaKristu, futhi ayanotha ezweni—Abaningi abaphrofethi basebenzela ukugcina abantu endleleni yeqiniso. Cishe ngonyaka wama 399 kuya kowama 361 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMormoni ufinyeza izingcwephe ezinkulu zikaNefi—Ubeka izingcwephe ezincane kanye nezinye izingcwephe—INkosi uBenjamini wenza kubekhona ukuthula ezweni. Cishe ngonyaka wama 385 emva kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uBenjamini ufundisa amadodana akhe ulimi kanye neziphrofetho zoyise—Inkolo kanye nempucuko yabo ilondolozwe ngenxa yemibhalo eyayigcinwe ezingcwepheni ezinhlobonhlobo—UMosiya uyakhethwa njengenkosi futhi unikezwa ukuthi agcine imibhalo kanye nezinye izinto. Cishe ngonyaka we 130 kuya kowe 124 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uBenjamini yethula inkulumo kubantu bayo—Ulanda ngokulunga, ubuqotho kanye nokugxila okholweni kokubusa kwakhe—Ubeluleka ukuthi basebenzele iNkosi yabo yaseZulwini—Labo abavukela uNkulunkulu bayokuzwa ubuhlungu obufana nomlilo ongacimiyo. Cishe ngonyaka we 124 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uBenjamini iyaqhubeka nenkulumo yayo—INkosi uMninimandla Onke izosebenza phakathi kwabantu isedokodweni lobumba—Igazi lizophuma kuzo zonke iziqu zoboya ngesikhathi Yona ihlawulela izono zomhlaba—Elayo yilona kuphela igama okuza ngalo insindiso—Abantu bangamkhumula umuntu wemvelo futhi babe ngabaNgcwele ngeNhlawulo—Ukuhlupheka kwababi kuzoba njengechibi lomlilo kanye nesibabuli. Cishe ngonyaka we 124 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uBenjamini iyaqhubeka nenkulumo yayo—Insindiso iza ngenxa yeNhlawulo—Kholwa kuNkulunkulu ukuze usindiswe—Gcina ukuthethelelwa kwezono zakho ngokukholwa—Yipha lokho onakho abampofu—Yenza zonke izinto ngokuhlakanipha kanye nangohlelo. Cishe ngonyaka we 124 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AbaNgcwele baba ngamadodana kanye namadodakazi kaKristu ngokholo—Ngenxa yalokho babizwa ngegama likaKristu—INkosi uBenjamini ibanxusa ukuthi baqine futhi banganyakaziswa emisebenzini emihle. Cishe ngonyaka we 124 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uBenjamini ibhala amagama abantu futhi ibeka abaphristi ukuthi babafundise—uMosiya ubusa njengenkosi elungile. Cishe ngonyaka we 124 kuya kowe 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amoni uthola izwe lakwaLehi-Nefi, lapho uLimihi eyinkosi khona—Abantu baLimihi basekuthunjweni kumaLamani—ULimihi ulanda ngomlando wabo—Umphrofethi (u-Abinadi) wayefakazile ukuthi uKristu unguNkulunkulu noBaba wazo zonke izinto—Labo abahlwanyela ukungcola bavuna isivunguvungu, futhi labo ababeka ithemba labo eNkosini bazokhululwa. Cishe ngonyaka we 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amoni ufundisa abantu baLimihi—Ufunda ngezingcwephe ezingamashumi amabili nane zamaJarede—Imibhalo yasendulo ingahunyushwa ngababoni—Asikho isipho esikhulu kunesokuba wumboni. Cishe ngonyaka we 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UZenifi uhola iqembu elisuka kwaZarahemla ukuyothatha izwe lakwa Lehi-Nefi—Inkosi yamaLamani ibavumela ukuthi balithathe izwe njengefa labo—Kukhona impi phakathi kwamaLamani kanye nabantu baZenifi. Cishe ngonyaka wama 200 kuya kowe 187 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Inkosi uLamani iyafa—Abantu bakhe bayizidlova futhi baba nolaka futhi bakholelwa emasikweni angalungile—UZenifi kanye nabantu bakhe bayabehlula. Cishe ngonyaka we 187 kuya kowe 160 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uNowa ibusa ngobubi—Ithanda kakhulu ukuphila ngesiphithiphithi nabafazi bayo kanye nezancinza—U-Abinadi uphrofetha ukuthi abantu bazothathwa bathunjwe—Impilo yakhe ifunwa yinkosi uNowa. Cishe ngonyaka we 160 kuya kowe 150 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Abinadi uboshelwa ukuphrofetha ngokubhujiswa kwabantu kanye nokufa kweNkosi uNowa—Abaphristi bamanga bacaphuna imibhalo engcwele futhi benza sengathi bagcina imiyalelo kaMose—U-Abinadi uqala ukubafundisa imithetho eyishumi. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Abinadi uvikelwa ngamandla kaNkulunkulu—Ufundisa imiYalelo eyiShumi—Insindiso ayizi ngomthetho kaMose kuphela—UNkulunkulu uqobo Lwakhe uzokwenza inhlawulo futhi akhulule abantu Bakhe. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Isaya ukhuluma njengomesiya—Ukwehliswa isithunzi kanye nokuhlupheka kukaMesiya kuyashiwo—Wenza umphefumulo Wakhe ube ngumnikelo wesono futhi uncengela izoni—Qhathanisa no-Isaya 53. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKristu uyikho kanjani kokubili uBaba kanye neNdodana—uyobancengela futhi athwale iziphambeko zabantu Bakhe—Bona kanye nabo bonke abaphrofethi abangcwele bayinzalo Yakhe—Ufeza uVuko—Abantwana abancane banokuphila okuphakade. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNkulunkulu ukhulula abantu esimweni sabo sokulahleka kanye nesokuwa—Labo abanaka inyama basala sengathi akuzange kube khona kukhululwa—UKristu ufeza ukuvukela ekuphileni okungenakuphela noma ubuhlungu obungenakuphela. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima uyawakholwa futhi uyawabhala amazwi ka-Abinadi—U-Abinadi uzwa ubuhlungu bokufa ngomlilo—Uphrofetha isifo kanye nokufa ngomlilo kubabulali bakhe. Cishe ngonyaka we 148 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ushumayela ngasese—Uchaza ngesivumelwano sombhabhadiso futhi ubhabhadisa emanzini kaMormoni—Uhlela iBandla likaKristu futhi ugcoba abaphristi—Bazondla bona futhi bafundisa abantu—U-Alima kanye nabantu bakhe babalekela iNkosi uNowa baya ehlane. Cishe ngonyaka we 147 kuya kowe 145 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UGidiyoni ufuna ukubulala iNkosi uNowa—AmaLamani ahlasela izwe—INkosi uNowa izwa ukufa ngomlilo—ULimihi ubusa njengenkosi yezwe engaphansi komunye umbusi. Cishe ngonyaka we 145 kuya kowe 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amanye amadodakazi amaLamani athunjwa ngabaphristi baNowa—AmaLamani aphaka impi kuLimihi kanye nabantu bakhe—Amabutho amaLamani abuyiselwa emuva futhi ayaxoliswa. Cishe ngonyaka we 145 kuya kowe 123 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abantu baLimihi bayashaywa futhi bayehlulwa ngamaLamani—Abantu baLimihi bahlangana no-Amoni futhi bayaphenduka—Batshela u-Amoni ngezingcwephe ezingamashumi amabili nane zamaJarede. Cishe ngonyaka we 122 kuya kowe 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abantu benza amasu okuthi babalekele ubugqili bamaLamani—AmaLamani enziwa ukuthi adakwe—Abantu bayeqa, babuyela eZarahemla, futhi baba ngaphansi kwenkosi uMosiya. Cishe ngonyaka we 121 kuya kowe 120 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima wenqaba ukuba yinkosi—Usebenza njengomphristi omkhulu—INkosi iyabajezisa abantu Bayo, futhi amaLamani anqoba izwe lakwaHelamu—U-Amuloni, umholi wabaphristi ababi benkosi uNowa, uyabusa engaphansi kwenkosi yamaLamani. Cishe ngonyaka we 145 kuya kowe 121 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amuloni uhlupha u-Alima kanye nabantu bakhe—Bazobulawa uma bekhuleka—INkosi yenza imithwalo yabo ibukeke ilula—Iyabakhulula ebugqilini, futhi babuyela eZarahemla. Cishe ngonyaka we 145 kuya kowe 120 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abozalo lukaMuleki abase Zarahemla baba ngamaNefi—Bafunda ngabantu ba-Alima kanye nabaZenifi—U-Alima ubhabhadisa uLimihi kanye nabo bonke abantu bakhe—UMosiya ugunyaza u-Alima ukuthi ahlele ibandla likaNkulunkulu. Cishe ngonyaka we 120 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amalungu amaningi eBandla aholelwa ekoneni ngabangakholwayo—U-Alima uthenjiswa ukuphila okuphakade—Labo abaphendukayo futhi babhabhadiswe bathola ukuthethelelwa—Amalungu eBandla asesonweni aphendukayo futhi avuma ku-Alima kanye naseNkosini ayothethelelwa; ngaphandle kwalokho, abayikubalwa kanye nabantu beBandla. Cishe ngonyaka we 120 kuya kowe 100 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMosiya uyakwenqabela ukuhlushwa futhi uyala ukuthi kubekhona ukulingana—U-Alima omncane kanye namadodana amane kaMosiya bafuna ukuchitha iBandla—Ingelosi iyaqhamuka futhi ibayala ukuthi bayiyeke indlela yabo yobubi—U-Alima ushaywa ngokuba yisimungulu—Bonke abantu kufanele bazalwe kabusha ukuze bazuze insindiso—U-Alima kanye namadodana kaMosiya bamemezela izindaba ezimnandi. Cishe ngonyaka we 100 kuya kowama 92 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amadodana kaMosiya ayahamba ayoshumayela kumaLamani—UMosiya usebenzisa amatshe amabili ababoni, ukuze ahumusha izingcwephe zamaJarede. Cishe ngonyaka wama 92 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMosiya uphakamisa ukuthi kukhethwe abahluleli esikhundleni senkosi—Amakhosi angalungile aholela abantu bawo esonweni—U-Alima omncane ukhethwa ukuthi abe ngumahluleli omkhulu ngezwi labantu—Phezu kwalokho ungumphristi omkhulu eBandleni lonke—U-Alima oMdala kanye noMosiya bayafa. Cishe ngonyaka wama 92 kuya kowama 91 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNehori ufundisa izimfundiso ezingamanga, umisa ibandla, uqala ubuphristi-mbumbulu, futhi ubulala uGidiyoni—UNehori ubulawelwa amacala akhe—Ubuphristi-mbumbulu kanye nokuhlushwa kuyanda phakathi kwabantu—Abaphristi bazondla bona, abantu banakekela abampofu, iBandla liyaphumelela. Cishe ngonyaka wama 91 kuya kowama 88 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amiliki ufuna ukuba yinkosi futhi uyenqatshwa ngezwi labantu—Abalandeli bakhe bamenza inkosi—Ama-Amiliki alwa namaNefi futhi ayehlulwa—AmaLamani kanye nama-Amiliki ahlanganisa amabutho futhi ayehlulwa—U-Alima ubulala u-Amiliki. Cishe ngonyaka wama 87 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ama-Amiliki ayesezibeke uphawu njengokwezwi lesiphrofetho—AmaLamani ayeseqalekisiwe ngokuhlubuka kwawo—Abantu bazilethela iziqalekiso zabo uqobo phezu kwabo—AmaNefi ehlula elinye ibutho lamaLamani. Cishe ngonyaka wama 87 kuya kowama 86 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ubhabhadisa izinkulungwane zabaphendukayo—Ububi bungena eBandleni, futhi inqubekela phambili yeBandla iyavimbeleka—UNefiha ubekwa ukuthi abe ngumahluleli omkhulu—U-Alima, njengomphristi omkhulu, uzinikela ebufundisini. Cishe ngonyaka wama 86 kuya kowama 83 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ukuze bathole insindiso, abantu kufanele baphenduke futhi bagcine imiyalelo, bazalwe kabusha, bahlanze izingubo zabo egazini likaKristu, bathobeke futhi bazihlubule ukuzikhukhumeza kanye nomhawu, benze imisebenzi yokulunga—UMalusi oMuhle ubiza abantu Bakhe—Labo abenza imisebenzi yobubi bangabantwana badeveli—U-Alima ufakaza ngeqiniso lemfundiso yakhe futhi uyala abantu ukuthi baphenduke—Amagama abalungile ayobhalwa encwadini yokuphila. Cishe ngonyaka wama 83 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
IBandla eZarahemla liyahlanzwa futhi liyahlelwa—U-Alima uya eGidiyoni ukuyoshumayela. Cishe ngonyaka wama 83 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKristu uyozalwa nguMariya—Uyoxegisa izibopho zokufa futhi athwale izono zabantu Bakhe—Labo abaphendukayo, ababhabhadiswayo, futhi abagcina imiyalelo bayoba nokuphila okuphakade—Ukungcola akunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu—Ukuzithoba, ukholo, ithemba, kanye nesihe kuyadingeka. Cishe ngonyaka wama 83 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima uyashumayela futhi ubhabhadisa eMeleki—Uyenqatshwa e-Amoniha futhi uyashiya—Ingelosi imyala ukuthi abuyele khona futhi amemezele ukuphenduka kubantu—Wemukelwa ngu-Amuleki, futhi bobabili bayashumayela e-Amoniha. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima uyala abantu bakwa-Amoniha ukuthi baphenduke—INkosi iyoba nomusa kumaLamani ngezinsuku zokugcina—Uma amaNefi ekushiya ukukhanya, ayobhujiswa ngamaLamani—INdodana kaNkulunkulu izoza masinyane—Izokhulula labo abaphendukayo, babhabhadiswe, futhi babe nokholo egameni Layo. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULehi ungowozalo lukaManase—U-Amuleki ulandisa ngomyalo wengelosi wokuthi anakekele u-Alima—Imithandazo yabalungile yenza ukuthi abantu basindiswe—Izazimthetho ezingalungile kanye nabehluleli babeka isisekelo sokubhujiswa kwabantu. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Uhlelo lwemali lwamaNefi luyachazwa—U-Amuleki ubanga noZeziromu—UKristu akazukubasindisa abantu besezonweni zabo—Yilabo abadla ifa lombuso wezulu kuphela abasindiswayo—Bonke abantu bazovukela ekungafini—Akukho ukufa emva koVuko. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ukhuluma noZeziromu—Izimfihlakalo zikaNkulunkulu zinganikwa kuphela abathembekileyo—Abantu behlulelwa ngemicabango, ngezinkolelo, ngamazwi, kanye nangemisebenzi yabo—Ababi bazokuzwa ukufa ngokomoya—Lempilo yasemhlabeni iyisikhathi sokulingwa—Isu lokukhululwa liletha uVuko futhi, ngokholo, nokuthethelelwa kwezono—Abaphendukayo bangawuthola umusa ngeNdodana eZelwe Yodwa. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amadoda abizwa ukuthi abe ngabaphristi abakhulu ngenxa yokholo lwawo olukhulu kanye nemisebenzi yawo emihle—Kufanele afundise imiyalelo—Ngenxa yokwenza ukulunga ayangcweliswa futhi angena ekuphumuleni kweNkosi—UMelkisedeki wayengomunye walaba—Izingelosi zimemezela izindaba zokuthokoza ezweni lonke—Zizomemezela ukuza kwangempela kukaKristu. Cishe ngonyaka wama 82 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima no-Amuleki bayaboshwa futhi bayashaywa—Amakholwa kanye nemibhalo yawo engcwele ashiswa ngomlilo—Laba abafela ukholo bemukelwa yiNkosi enkazimulweni—Izindonga zetilongo ziyaqhekeka futhi ziyawa—U-Alima kanye no-Amuleki bayakhululwa, futhi abahluphi babo bayabulawa. Cishe ngonyaka wama 82 kuya kowama 81 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima kanye no-Amuleki baya eSidomi futhi bamisa ibandla—U-Alima welapha uZeziromu, ongena eBandleni—Abaningi bayabhabhadiswa, futhi iBandla liyaphumelela—U-Alima kanye no-Amuleki baya eZarahemla. Cishe ngonyaka wama 81 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaLamani abulala abantu bakwa-Amoniha—UZoramu uholela amaNefi ekunqobeni amaLamani—U-Alima no-Amuleki kanye nabanye abaningi bashumayela izwi—Bafundisa ukuthi emva kokuVuka Kwakhe uKristu uyovela kumaNefi. Cishe ngonyaka wama 81 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Amadodana kaMosiya anomoya wokuphrofetha nowokwambulelwa—Ahamba izindlela zawo ezahlukene ukuyomemezela izwi kumaLamani—U-Amoni uya ezweni lakwa-Ishmayeli futhi uba yisisebenzi seNkosi uLamoni—U-Amoni usindisa imfuyo yenkosi futhi ubulala izitha zayo emanzini aseSebu. Amavesi 1–3, cishe ngonyaka wama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu; ivesi 4, cishe ngonyaka wama 91 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu; amavesi 5–39, cishe ngonyaka wama 91 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi uLamoni icabanga ukuthi u-Amoni unguMoya oMkhulu—U-Amoni ufundisa inkosi ngeNdalo, ngokusebenza kukaNkulunkulu kubantu, kanye nangokukhululwa okuza ngoKristu—ULamoni uyakholwa futhi uwela phansi sengathi ufile. Cishe ngonyaka wama 90 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
ULamoni uthola ukukhanya kokuphila okuphakade futhi ubona uMkhululi—Abomuzi wakhe bayaquleka, futhi abaningi babona izingelosi—U-Amoni ulondolozwa ngendlela emangalisayo—Ubhabhadisa abaningi futhi umisa ibandla phakathi kwabo. Cishe ngonyaka wama 90 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi ithumela u-Amoni eMidoni ukuthi ayokhulula abafowabo ababoshiwe—U-Amoni kanye noLamoni bahlangana noyise kaLamoni, oyinkosi ezweni lonke—U-Amoni uphoqa inkosi endala ukuthi ivume ukukhululwa kwabafowabo. Cishe ngonyaka wama 90 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Aroni ufundisa ama-Amaleki ngoKristu kanye nangeNhlawulo Yakhe—U-Aroni kanye nabafowabo bayaboshwa eMidoni—Emva kokukhululwa kwabo, bafundisa emasinagogeni futhi benza abaningi baphenduke—ULamoni uvumela inkululeko yenkolo kubantu ezweni lakwa-Ishmayeli. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Aroni ufundisa uyise kaLamoni ngeNdalo, ukuWa kuka-Adamu, kanye nangesu lokukhululwa ngoKristu—INkosi kanye nendlu yayo yonke bayaphenduka—Ukuhlukana kwezwe phakathi kwamaNefi kanye namaLamani kuyachazwa. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Inkululeko ngokwenkolo iyamenyezelwa—AmaLamani emazweni kanye nasemadolobheni ayisikhombisa ayaphenduka—Azibiza ngama-Anti-Nefi-Lehi futhi isiqalekiso siyasuswa kuwo—Ama-Amaleki kanye nama-Amuloni ayalenqaba iqiniso. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaLamani alwa nabantu baNkulunkulu—Ama-Anti-Nefi-Lehi athokoza kuKristu futhi avakashelwa yizingelosi—Bakhetha ukuzwa ukufa kunokuthi bazivikele—AmaLamani amaningi ayaphenduka. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Uchuku lwamaLamani luyanda—Inzalo yabaphristi baNowa iyafa njengoba u-Abinadi aphrofetha—Amaningi amaLamani ayaphenduka futhi ahlangana nabantu baka-Anti-Nefi-Lehi—Bakholwa kuKristu futhi bagcina umthetho kaMose. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amoni uthokoza eNkosini—Abakholwayo baqiniswa yiNkosi futhi banikezwa ulwazi—Ngokholo abantu bangaletha izinkulungwane zabantu ekuphendukeni—UNkulunkulu unawo wonke amandla futhi uqonda zonke izinto. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi iyala u-Amoni ukuthi aholele abantu bakwa-Anti-Nefi-Lehi ekuphepheni—Ekuhlanganeni no-Alima, injabulo ka-Amoni iqeda amandla akhe—AmaNefi anikeza ama-Anti-Nefi-Lehi izwe lakwaJereshoni—Babizwa ngabantu ba-Amoni. Cishe ngonyaka wama 90 kuya kowama 77 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaLamani ayahlulwa empini enkulu kakhulu—Amashumi ezinkulungwane ayabulawa—Ababi bayiswa esimweni sosizi olungapheliyo; abalungile bathola injabulo engenakuphela nanini. Cishe ngonyaka wama 77 kuya kowama 76 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ufisa ukumemezela ukuphenduka ngomfutho wezingelosi—INkosi inika izizwe zonke abafundisi—U-Alima uthokoza ngomsebenzi weNkosi kanye nempumelelo ka-Amoni kanye nabafowabo. Cishe ngonyaka wama 76 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKorihori, umphiki-Kristu, uhlekisa ngoKristu, iNhlawulo, kanye nomoya wokuphrofetha—Ufundisa ukuthi akekho uNkulunkulu, akukho ukuwa komuntu, asikho isijeziso sesono, futhi nokuthi akekho uKristu—U-Alima ufakaza ngokuthi uKristu uzoza futhi nokuthi zonke izinto zikhomba ukuthi uNkulunkulu ukhona—UKorihori ufuna isibonakaliso futhi ushaywa ngokuba yisimungulu—Udeveli uvele kuKorihori njengengelosi futhi wamfundisa ukuthi athini—UKorihori ugxotshwa phansi futhi uyafa. Cishe ngonyaka wama 76 kuya kowama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima uhola umsebenzi wokuyobuyisa amaZoramu ahlubukile—AmaZoramu ayamphika uKristu, akholelwa emcabangweni wokukhethwa ongamanga, futhi adumisa ngemikhuleko ehleliwe—Abefundisi bagcwaliswa ngoMoya oyiNgcwele—Izinhlupheko zabo zigwinywa enjabulweni kaKristu. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ufundisa abampofu abathotshiswe yizinhlupheko zabo—Ukholo ngukuthembela kulokho okungabonwayo okuyiqiniso—U-Alima ufakaza ngokuthi izingelosi zifundisa amadoda, abesifazane, kanye nabantwana—U-Alima uqhathanisa izwi nembewu—Kufanele litshalwe futhi londliwe—Bese likhula liba yisihlahla okukhiwa kuso isithelo sokuphila okuphakade. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UZenoshe wafundisa ukuthi abantu kumele bakhuleke futhi bakhonze kuzo zonke izindawo, futhi nokuthi izahlulelo ziyasuswa ngenxa yeNdodana—UZenoki wafundisa ukuthi umusa unikwa ngenxa yeNdodana—UMose waphakamisa ehlane isibonakaliso seNdodana kaNkulunkulu. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amuleki ufakaza ukuthi izwi lensindiso likuKristu—Ngaphandle kokuthi inhlawulo yenziwe, sonke isintu kufanele silahleke—Wonke umthetho kaMose ukhomba emnikelweni weNdodana kaNkulunkulu—Isu laphakade lokukhululwa lincike okholweni kanye nasekuphendukeni—Khulekela izibusiso zesikhashana kanye nezikamoya—Lempilo iyisikhathi sokuthi abantu bazilungisele ukuhlangana noNkulunkulu—Sebenzela ukusindiswa kwakho ngokwesaba phambi kukaNkulunkulu. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Ukushunyayelwa kwezwi kuqeda ubuqili bamaZoramu—Baxosha abaguqukayo, okuthi emva kwalokho bazihlanganisa nabantu baka-Amoni eJereshoni—U-Alima uyadabuka ngenxa yobubi babantu. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima ufakaza kuHelamani ngokuguquka kwakhe emva kokubona ingelosi—Wezwa ubuhlungu bomphefumulo oyiswe ekujezisweni; Wabiza igama likaJesu, futhi emva kwalokho wabe esezalwa nguNkulunkulu—Injabulo emnandi yagcwalisa umphefumulo wakhe—Wabona izixuku-ngezixuku zezingelosi zidumisa uNkulunkulu—Abaningi abaguqukileyo bazwile futhi babona njengoba naye ezwile futhi wabona. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Izingcwephe zethusi kanye neminye imibhalo engcwele kuyagcinwa ukuze kulethe abantu ensindisweni—AmaJarede abhujiswa ngenxa yobubi bawo—Izifungo kanye nezivumelwano zawo eziyimfihlo kufanele kungavezwa ebantwini—Bonisanani neNkosi ekwenzeni kwenu konke—Njengoba iLiyahona yaqondisa amaNefi, kanjalo nezwi likaKristu liholela abantu empilweni yaphakade. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UShibiloni wahlushwa ngenxa yokulunga—Ukusindiswa kukuKristu, ongukuphila kanye nokukhanya komhlaba—Fakani amatomu kuyo yonke imizwa yenu. Cishe ngonyaka wama 73 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Isono sokulalana siyisinengiso—Izono zikaKoriyantoni zenza amaZoramu ukuthi angalamukeli izwi—Ukukhululwa kukaKristu kuyakwazi ukusindisa ababekholwa kungakenziwa. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UKristu ufeza uvuko lwabantu bonke—Abafileyo abalungileyo baya eparadesi kuthi ababi baye ebumnyameni obungaphandle ukuze bayolindela usuku lokuvuka—Zonke izinto zizobuyiselwa ohlakeni lwazo olufanele kanye noluphelele ngoVuko. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
EkuVukeni abantu bavuka besesimweni senjabulo engapheliyo noma usizi olungapheliyo—Ububi abukaze nanini bube yintokozo—Abantu abanaka inyama abanaye uNkulunkulu emhlabeni—Wonke umuntu ekuBuyiselweni uyophinda athole isimilo kanye nobunjalo bakhe akuzuza esese mhlabeni. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Impilo yasemhlabeni iyisikhathi sokuvivinywa esivumela umuntu ukuthi aphenduke futhi asebenzele uNkulunkulu—UkuWa kwaletha ukufa komzimba kanye nokomoya kuwo wonke umuntu—Ukukhululwa kuza ngokuphenduka—UNkulunkulu Yena uqobo lwakhe uhlawulela izono zomhlaba—Umusa ungowalabo abaphendukayo—Bonke abanye bangaphansi kokulunga kukaNkulunkulu—UMusa uza ngenxa yeNhlawulo—Ngabadabuke ngempela ngokona kuphela abasindiswayo. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Alima kanye namadodana akhe bashumayela izwi—AmaZoramu kanye nabanye abahlubuki bamaNefi baba ngamaLamani—AmaLamani alwa namaNefi empini—UMoroni uhlomisa amaNefi ngesihlangu sokuzivikela—INkosi yambulela u-Alima isu lamaLamani—AmaNefi avikela amakhaya awo, inkululeko yawo, imindeni yawo, kanye nenkolo yawo—Amabutho kaMoroni kanye noLehi azungeza amaLamani. Cishe ngonyaka wama 74 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMoroni uyala amaLamani ukuthi enze isivumelwano soxolo noma babulawe—UZerahemina uyasenqaba lesi siphakamiso, impi iyaqala futhi—Amabutho kaMoroni ayawanqoba amaLamani. Cishe ngonyaka wama 74 kuya kowama 73 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UHelamani uyawakholwa amazwi ka-Alima—U-Alima uphrofetha ngokonakala kwamaNefi—Uyalibusisa futhi uyaliqalekisa izwe—U-Alima kungenzeka ukuthi wathathwa nguMoya wenyuka, ngisho njengoMose—Ukungezwani kuyanda eBandleni. Cishe ngonyaka wama 73 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amalikiya wenza uzungu lokuba yinkosi—UMoroni uphakamisa isibonakaliso senkululeko—Uhlanganisa abantu ukuthi bavikele inkolo yabo—Abakholwa ngeqiniso babizwa ngamaKristu—Insali kaJosefa iyolondolozwa—U-Amalikiya kanye nabahlubuki babalekela ezweni lakwaNefi—Labo abangezukuyisekela imigomo yenkululeko bayabulawa. Cishe ngonyaka wama 73 kuya kowama 72 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amalikiya usebenzisa inkohliso, ukubulala, kanye necebo eliyimfihlo ukuze abe yinkosi yamaLamani—Abahlubuki bamaNefi banobubi futhi banobudlova kakhulu kunamaLamani. Cishe ngonyaka wama 72 ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu.
U-Amalikiya uphehla amaLamani ngokumelene namaNefi—UMoroni ulungiselela abantu bakhe ukuthi bavikele okuthandwa ngamaKristu—Uthokozela inkululeko futhi uyinceku enamandla kaNkulunkulu. Cishe ngonyaka wama 72 ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu.
AmaLamani ahlaselayo awakwazi ukuthatha amadolobha aqinisiwe akwa-Amoniha nawakwaNowa—U-Amalikiya uqalekisa uNkulunkulu futhi uyafunga ukuthi uzoliphuza igazi likaMoroni—UHelamani kanye nabafowabo bayaqhubeka nokuqinisa iBandla. Cishe ngonyaka wama 72 ngaphambi kokuzalwa kukaJesu Kristu.
UMoroni uqinisa amazwe amaNefi—Bakha amadolobha amaningi amasha—Izimpi kanye nokubhujiswa kwehlela amaNefi ngezinsuku zobubi kanye nezinengiso zabo—UMoriyantoni kanye nabahlubuki bakhe behlulwa nguTeyankumi—UNefiha uyafa, futhi indodana yakhe uPahorani uthatha isihlalo sokwahlulela. Cishe ngonyaka wama 72 kuya kowama 67 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abantu benkosi bafuna ukushintsha umthetho futhi babeke inkosi—UPahorani kanye nabantu abathanda inkululeko basekelwa yizwi labantu—UMoroni uphoqa abantu benkosi ukuthi bavikele izwe labo noma babulawe—U-Amalikiya kanye namaLamani bathumba amaningi amadolobha aqinisiwe—UTeyankumi ududula uhlaselo lwamaLamani futhi ubulala u-Amalikiya esetendeni lakhe. Cishe ngonyaka wama 67 kuya kowama 66 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amoroni ulandela u-Amalikiya njengenkosi yamaLamani—UMoroni, uTeyankumi, kanye noLehi bahola amaNefi empini abanqoba kuyo amaLamani—Idolobha lakwaMuleki liyathathwa futhi, futhi uJakobe umZoramu uyabulawa. Cishe ngonyaka wama 66 kuya kowama 64 ngaphamlbi kokuzalwa kukaKristu.
Iziboshwa zamaLamani zisetshenziswa ukuqinisa idolobha iNala—Ukungezwani phakathi kwamaNefi kwenza ukuthi amaLamani anqobe—UHelamani uthatha isikhundla sokukhuzwa kwezinsizwa eziyizinkulungwane ezimbili ezingamadodana abantu ba-Amoni. Cishe ngonyaka wama 64 kuya kowama 63 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
U-Amoroni kanye noMoroni baxoxisana ngokushintshana ngeziboshwa—UMoroni ufuna ukuthi amaLamani ahoxise futhi ayeke ukuhlasela kwawo ngokubulala—U-Amoroni ufuna ukuthi amaNefi abeke phansi izikhali zawo futhi abe ngaphansi kwamaLamani. Cishe ngonyaka wama 63 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMoroni uyenqaba ukushintshana ngeziboshwa—Abalindi bamaLamani bayengwa ngokuthi badakwe, futhi iziboshwa zamaNefi ziyakhululwa—Idolobha lakwaGide lithathwa ngaphandle kokuchitha igazi. Cishe ngonyaka wama 63 kuya kowama 62 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UHelamani uthumela incwadi kuMoroni, elanda ngesimo sempi namaLamani—U-Antipasi kanye noHelamani bazuza ukunqoba okukhulu phezu kwamaLamani—Izinsizwa eziyizinkulungwane ezimbili ezingamadodana kaHelamani zilwa ngamandla amangalisayo, futhi akekho namunye kuzo obulawayo. Ivesi 1, cishe ngonyaka wama 62 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu; amavesi 2–19, cishe ngonyaka wama 66 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu; amavesi 20–57, cishe ngonyaka wama 65 kuya kowama 64 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UHelamani ulanda ngokuthathwa kwe-Antipara nokunikelwa kanye nokuvikelwa kweKumeni kamuva—Izinsizwa zakhe zama-Amoni zilwa ngesibindi; zonke ziyalimala, kodwa akukho nayinye ebulawayo—UGide ubika ngokubulawa kanye nokweqa kweziboshwa zamaLamani. Kwakuphakathi kweminyaka engama 65 nengama 63 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UHelamani, uGide, kanye noTeyomineri bathatha idolobha lakwaManti ngecebo lokuhlakanipha—AmaLamani ayahlehla—Amadodana abantu ba-Amoni ayalondolozwa ngesikhathi emi eqinile ekuvikeleni inkululeko kanye nokholo lwawo. Kwakungunyaka wama 63 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMoroni ucela uPahorani ukuthi aqinise amabutho kaHelamani—AmaLamani athatha idolobha lakwaNefiha—UMoroni uwuthukuthelele umkhandlu ophetheyo. Cishe ngonyaka wama 62 ngaphambi kokuzalwa kuka Kristu.
UMoroni ukhononda kuPahorani ngokunganakekelwa kwamabutho ngumkhandlu ophetheyo—INkosi ivumela abalungileyo ukuthi babulawe—AmaNefi kufanele asebenzise amandla awo kanye nezindlela zawo zonke ukuze azikhulule ezitheni zawo—UMoroni usongela ukulwa nomkhandlu ophetheyo ngaphandle uma usizo lunikwa amabutho akhe. Cishe ngonyaka wama 62 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UPahorani utshela uMoroni ngokushokobeza kanye nokuvukelwa komkhandlu ophetheyo—Amadoda enkosi athatha iZarahemla futhi ahlangana namaLamani—UPahorani ucela usizo lwamasosha ukuze amelane nabahlubuki. Cishe ngonyaka wama 62 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UMoroni uyahamba uyonikeza usizo kuPahorani ezweni lakwaGidiyoni—Abantu benkosi abenqaba ukuvikela izwe labo bayabulawa—UPahorani kanye noMoroni bayayithatha futhi iNefiha—Amaningi amaLamani ahlangana nabantu bakwa-Amoni—UTeyankumi uyambulala u-Amoroni futhi naye ngokunjalo uyabulawa—AmaLamani ayakhishwa ezweni, futhi kumiswa ukuthula—UHelamani ubuyela ebufundisini futhi wakha iBandla. Cishe ngonyaka wama 62 kuya kowama 57 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UShibiloni futhi kamuva noHelamani baphatha imibhalo engcwele—AmaNefi amaningi ahamba aya ezweni elingasenyakatho—UHagoti wakha imikhumbi, ehamba olwandle olungasentshonalanga—UMoroniha wehlula amaLamani empini. Cishe ngonyaka wama 56 kuya kowama 52 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UPahorani wesibili uba wumahluleli omkhulu futhi ubulawa nguKishkumeni—UPakumeni ungena esihlalweni sokwahlulela—UKoriyantuma uhola amabutho amaLamani, uthatha iZarahemla, futhi ubulala uPakumeni—UMoroniha unqoba amaLamani futhi uphinda uyayithatha iZarahemla, futhi uKoriyantuma uyabulawa. Cishe ngonyaka wama 52 kuya kowama 50 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UHelamani, indodana kaHelamani, uba ngumahluleli omkhulu—UGadiyantoni uhola iqembu likaKishikumeni—Inceku kaHelamani ibulala uKishikumeni, futhi iqembu likaGadiyantoni libalekela ehlane. Cishe ngonyaka wama 50 kuya kowama 49 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaNefi amaningi athuthela ezweni elingasenyakatho—Akha izindlu zikasemende futhi agcina imibhalo eminingi—Amashumi ezinkulungwane ayaphenduka futhi ayabhabhadiswa—Izwi likaNkulunkulu liholela abantu ekusindisweni—UNefi indodana kaHelamani uthatha isihlalo sokwahlulela. Cishe ngonyaka wama 49 kuya kowama 39 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abahlubuki bamaNefi kanye namaLamani bahlanganisa amabutho futhi bathatha izwe lakwaZarahemla—Ukwehlulwa kwamaNefi kuza ngenxa yobubi bawo—IBandla liyancipha, futhi nabantu baba buthakathaka njengamaLamani. Cishe ngonyaka wama 38 kuya kowama 30 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi kanye noLehi bazinikela ekushumayeleni—Amagama abo abakhuthaza ukuthi izimpilo zabo bazenze zifane nezokhokho babo—UKristu usindisa labo abaphendukayo—UNefi noLehi baphendula abaningi futhi bayaboshwa, futhi bazungezwa ngumlilo—Ifu lobumnyama ligubezela abantu abangamakhulu amathathu—Iphansi liyazamazama, futhi izwi liyala abantu ukuthi baphenduke—UNefi kanye noLehi bakhuluma nezingelosi, futhi isixuku sizungezwa ngumlilo. Cishe ngonyaka wama 30 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaLamani alungile ashumayela kumaNefi amabi—Womabili amaqembu abantu ayaphumelela ngesikhathi sokuthula nenala—ULusifa, umqambi wesono, uphehla izinhliziyo zababi kanye nabaphangi baGadiyantoni ngokuphathelene nokubulala nobubi—Abaphangi bathatha umkhandlu ophetheyo wamaNefi. Cishe ngonyaka wama 29 kuya kowama 23 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi uyenqatshwa enyakatho futhi ubuyela eZarahemla—Uyakhuleka esembhoshongweni wakhe osensimini futhi emva kwalokho unxusa abantu ukuthi baphenduke noma bafe. Cishe ngonyaka wama 23 kuya kowama 21 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abehluleli abakhohlakele bafuna ukuqhatha uNefi nabantu—U-Abrahama, uMose, uZenoshe, uZenoki, u-Eziya, u-Isaya, uJeremiya, uLehi kanye noNefi bonke bafakaza ngoKristu—Ngokuholwa ngumoya uNefi umemezela ukubulawa komehluleli omkhulu. Cishe ngonyaka wama 23 kuya kowama 21 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Izithunywa zithola umahluleli omkhulu efile esihlalweni sokwahlulela—Ziyaboshwa kamuva ziyakhululwa—Ngokuholwa ngumoya uNefi ukhomba uSiyentami njengombulali—UNefi wemukelwa ngabanye njengomphrofethi. Cishe ngonyaka wama 23 kuya kowama 21 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi inika uNefi amandla okubopha—Unikezwa amandla okubopha kanye nokukhulula emhlabeni kanye nasezulwini—Uyala abantu ukuthi baphenduke noma bafe—Umoya uyamthwala umyisa ezixukwini ngezixuku. Cishe ngonyaka wama 21 kuya kowama 20 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi uvumisa iNkosi ukuthi ilethe indlala esikhundleni sempi yabo—Abantu abaningi bayafa—Bayaphenduka, futhi uNefi uncenga iNkosi ukuba bathole imvula—UNefi kanye noLehi bathola eziningi izambulo—Abaphangi baGadiyantoni bayazibeka ezweni. Cishe ngonyaka wama 20 kuya kowesi 6 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
Abantu kabaqinile futhi bayiziwula futhi bayashesha ukwenza ububi—INkosi iyabajeziza abantu Bayo—Ukungabi lutho kwabantu kuqhathaniswa namandla kaNkulunkulu—Ngosuku lokwahlulela, abantu bazozuza impilo yaphakade noma ukujeziswa kwaphakade. Cishe ngonyaka wesi 6 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
USamuweli umLamani uphrofetha ngokubhujiswa kwamaNefi ngaphandle kokuthi aphenduke—Wona kanye nengcebo yawo ayaqalekiswa—Ayabenqaba futhi abakhanda ngamatshe abaphrofethi, azungezwa ngamadimoni, futhi afuna injabulo ekwenzeni ububi. Cishe ngonyaka wesi 6 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
USamuweli ubikezela ukukhanya ngesikhathi sasebusuku kanye nenkanyezi entsha ngokuzalwa kukaKristu—UKristu ukhulula abantu ekufeni komzimba kanye nokukamoya—Izibonakaliso zokufa Kwakhe kuzoba yizinsuku ezintathu zobumnyama, ukuqhekeka kwamadwala, kanye nemibheduko emikhulu yemvelo. Cishe ngonyaka wesi 6 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
INkosi yawajezisa amaNefi ngoba Yayiwathanda—AmaLamani aphendukile agxilile futhi aqinile okholweni—INkosi iyokuba nesihawu kumaLamani ngezinsuku zokugcina. Cishe ngonyaka wesi 6 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
AmaNefi akholwa uSamuweli abhabhadiswa nguNefi—USamuweli akabulaleki ngemicibisholo kanye nangamatshe amaNefi angaphendukile—Abanye baqinisa izinhliziyo zabo, futhi abanye babona izingelosi—Abangakholwa bathi akunamqondo ukukholwa kuKristu kanye nokuza Kwakhe eJerusalema. Cishe ngonyaka wesi 6 kuya kowoku 1 ngaphambi kokuzalwa kukaKristu.
UNefi, indodana kaHelamani, iyemuka ezweni, futhi indodana yakhe uNefi igcina imibhalo—Nakuba izibonakaliso kanye nezimangaliso zivama, ababi bahlela ukubulala abalungileyo—Ubusuku bokuzalwa kukaKristu buyafika—Isibonakaliso siyanikwa, futhi inkanyezi entsha iyavela—Amanga kanye nenkohliso kuyanda, futhi abaphangi baGadiyantoni babulala abaningi. Cishe ngonyaka weNkosi woku 1 kuya kowesi 4.
Ububi kanye nezinengiso kuyanda phakathi kwabantu—AmaNefi kanye namaLamani ayahlangana ukuze azivikele kubaphangi baGadiyantoni—AmaLamani aphendukile aba mhlophe futhi abizwa ngamaNefi. Cishe ngonyaka weNkosi wesi 5 kuya kowe 16.
UGidiyani, umholi wamaGadiyantoni, ufuna ukuthi uLakonewu kanye namaNefi bazinikele kanye namazwe abo—ULakonewu ubeka uGidigidoni njengenduna enkhulu yamabutho—AmaNefi abuthana eZarahemla kanye naseNala ukuze azivikele. Cishe ngonyaka weNkosi we 16 kuya kowe 18.
Amabutho amaNefi ayabehlula abaphangi baGadiyantoni—UGidiyani uyabulawa, futhi nowamlandela esikhundleni sakhe, uZeminariha, uyalengiswa—AmaNefi ayayidumisa iNkosi ngokunqoba kwawo. Cishe ngonyaka weNkosi we 19 kuya kowama 22.
AmaNefi ayaphenduka futhi ayazishiya izono zawo—UMormoni ubhala umlando wabantu bakubo futhi umemezela izwi laphakade kubo—U-Israyeli uzoqoqwa ekusakazekeni kwakhe isikhathi eside. Cishe ngonyaka weNkosi wama 22 kuya kowama 26.
AmaNefi ayaphumelela—Ukuzikhukhumeza, ukunotha, kanye nokuhlukanisana ngokwezigaba kuyaqala—IBandla liyahlukana ngenxa yokungezwani—USathane uholela abantu bavukelane ngokusobala—Abaphrofethi abaningi bamemezela ukuphenduka futhi bayabulawa—Ababulali babo benza uzungu lokuwuthatha umkhandlu ophetheyo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 26 kuya kowama 30.
Umahluleli omkhulu uyabulawa, umkhandlu ophetheyo uyaqewa, futhi abantu bayehlukana baba yizizwana—UJakobe, umphiki-Kristu, uba yinkosi yeqembu eliyimfihlo—UNefi ushumayela ukuphenduka kanye nokukholwa kuKristu—Izingelosi ziyamsebenzela nsukuzonke, futhi uvusa umfowabo ekufeni—Abaningi bayaphenduka futhi bayabhabhadiswa. Cishe ngonyaka weNkosi wama 30 kuya kowama 33.
Izivunguvungu, ukuzamazama komhlaba, imililo, izishingishane, kanye nemibheduko yemvelo ifakazela ukubethelwa kukaKristu—Abantu abaningi bayafa—Ubumnyama bumboza izwe izinsuku ezintathu—Labo abaseleyo balilela isimo sabo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 33 kuya kowama 34.
Ebumnyameni, izwi likaKristu limemezela ukubhujiswa kwabantu abaningi kanye namadolobha ngenxa yobubi babo—Phezu kwalokho umemezela ngobunkulunkulu Bakhe, wazisa ukuthi umthetho kaMose usugcwalisekile, futhi umema abantu ukuthi beze Kuye futhi basindiswe. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
Kukhona ukuthula ezweni amahora amaningi—Izwi likaKristu lithembisa ukuqoqa abantu Bakhe njengesikhukhukazi siqoqa amatshwele aso—Ingxenye enkulu yabantu abalungile ilondoloziwe. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34 kuya kowama 35.
UBaba ufakaza ngeNdodanaYakhe eThandekayo—UKristu uyavela futhi umemezela ngeNhlawulo Yakhe—Abantu bezwa amanxeba ezandleni kanye nasezinyaweni Zakhe kanye nasohlangothini—Bayakhala bathi Hosana—Ubeka obala inkambiso kanye nendlela yombhabhadiso—Umoya wokubanga ungokadeveli—Imfundiso kaKristu ingukuthi abantu kufanele bakholwe futhi babhabhadiswe futhi bemukele uMoya oyiNgcwele. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu ubiza abafundi abayishumi nambili futhi ubanika amandla—Ukhuluma kumaNefi intshumayelo efana neNtshumayelo yaseNtabeni—Ukhuluma ngeziBusiso—Izimfundiso zakhe zedlula futhi zibaluleke kakhulu kunomthetho kaMose—Abantu bayalwa ukuthi baphelele du njengoba Naye kanye noYise bephelele du—Qhathanisa noMathewu 5. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu ufundisa amaNefi uMkhuleko weNkosi—Kufanele babeke amagugu abo ezulwini—Abafundi abayishumi nambili ebufundisini babo bayalwa ukuthi bangacabangi ngezinto eziyizidingo—Qhathanisa noMathewu 6. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu uyala ukuthi: Ningehluleli; celani kuNkulunkulu; qaphelani abaphrofethi bamanga—Wethembisa insindiso kulabo abenza intando kaBaba—Qhathanisa noMathewu 7. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu umemezela ukuthi umthetho kaMose ugcwalisekile Kuye—AmaNefi angezinye zezimvu akhuluma ngazo eJerusalema—Ngenxa yobubi, abantu beNkosi abaseJerusalema abazi ngezimvu ezihlakazekile zika-Israyeli. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu uyala abantu ukuthi bazindle ngamazwi Akhe futhi baku khulekele ukuwaqonda—Uphilisa abagulayo babo—Ukhulekela abantu, esebenzisa ulimi olungeke lwabhalwa—Izingelosi ziyabasebenzela futhi umlilo uzungeza abantwana babo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu umisa isidlo phakathi kwamaNefi—Bayalwa ukuthi bakhuleke njalo egameni Lakhe—Labo abadla umzimba Wakhe futhi baphuze igazi Lakhe ngokungafanele bayavinjelwa—Abafundi banikwa amandla okunikeza uMoya oyiNgcwele. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
Abafundi abayishumi nambili bafundisa abantu futhi bakhulekela uMoya oyiNgcwele—Abafundi bayabhabhadiswa futhi bathola uMoya oyiNgcwele kanye nokusetshenzelwa yizingelosi—UJesu uyakhuleka esebenzisa amazwi angenakubhalwa—Ufakaza ngokholo olukhulu kakhuku lwalamaNefi. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu unika isinkwa kanye newayini ngokumangalisayo futhi uyaphinda ubusisela abantu isidlo—Insali kaJakobe iyofinyelela olwazini lweNkosi uNkulunkulu wayo futhi iyothola njengefa izwe laseMelika—UJesu ungumphrofethi njengoMose, futhi amaNefi angabantwana babaphrofethi—Abanye babantu beNkosi bayoqoqelwa eJerusalema. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
U-Israyeli uzoqoqwa ngesikhathi sekuvela iNcwadi kaMormoni—AbeZizwe bazomiswa njengabantu abakhululekile eMelika—Bazosindiswa uma bekholwa futhi belalela; kungenjalo, bazosuswa futhi banqotshwe—U-Israyeli uzokwakha iJerusalema Entsha, futhi izizwana ezilahlekile zizobuya. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
Ngezinsuku zokugcina, iSiyoni kanye nezikhonkwane zayo izomiswa, futhi u-Israyeli uzoqoqwa ngesihawu kanye nangobumnene—Bazonqoba—Qhathanisa no-Isaya 54. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu uyawavuma amazwi ka-Isaya—Uyala abantu ukuthi babacwaninge abaphrofethi—Amazwi kaSamuweli umLamani mayelana noVuko ahlanganiswa nemibhalo yabo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
Isithunywa seNkosi sizolungisa indlela yokuZa KwesiBili—UKristu uzohlala esihlalweni sokwahlulela—U-Israyeli uyalwa ukuthi akhokhe okweshumi kanye neminikelo—Incwadi yesikhumbuzo iyagcinwa—Qhathanisa noMalaki 3. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
NgokuZa kwesiBili, abaziqhenyayo kanye nababi bazoshiswa njengamabibi—U-Eliya uzobuya ngaphambi kwalolo suku olukhulu nolwesabekayo—Qhathanisa noMalaki 4. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu uchaza zonke izinto kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni—Abantwana nezingane zikhuluma izinto ezimangalisayo ezingena kubhalwa—Labo abaseBandleni likaKristu banezinto zonke ngokufanayo phakathi kwabo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34.
UJesu ubayala ukuthi babize iBandla ngegama Lakhe—Umsebenzi kanye nomnikelo Wakhe ohlawulayo kuyivangeli Lakhe—Abantu bayalwa ukuthi baphenduke futhi babhabhadiswe ukuze bangcweliswe ngoMoya oyiNgcwele—Kufanele babe ngisho njengoJesu. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34 kuya kowama 35.
Abayisishiyagalolunye kubafundi abayishumi nambili bayafisa futhi bathenjiswa ukuba yizindlalifa embusweni kaKristu uma befa—AmaNefi amaThathu ayafisa futhi anikwa amandla phezu kokufa ukuze ahlale emhlabeni uJesu aze aphinde abuye futhi—Ayaguqulwa futhi abona izinto okungavunyelwe ukuthi zikhulunywe, futhi kumanje asebenza phakathi kwabantu. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34 kuya kowama 35.
Ukuvela kweNcwadi kaMormoni kuwuphawu lokuthi iNkosi isiqalile ukuqoqa u-Israyeli kanye nokugcwalisa izivumelwano Zayo—Labo abenqaba izambulo Zayo zezinsuku zokugcina kanye nezipho bazoqalekiswa. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34 kuya kowama 35.
AbeZizwe bezinsuku zokugcina bayayalwa ukuthi baphenduke, beze kuKristu, futhi babalwe kanye nendlu ka-Israyeli. Cishe ngonyaka weNkosi wama 34 kuya kowama 35.
AmaNefi kanye namaLamani bonke baphendukele eNkosini—Bonke baba nezinto zonke ngokufanayo, benza izimangaliso, futhi bayaphumelela ezweni—Emva kweminyaka engamakhulu amabili, uqhekeko, ububi, amabandla amanga, kanye nokuhlushwa kuyaqubuka—Emva kweminyaka engamakhulu amathathu, amaNefi kanye namaLamani aba nobubi—U-Amaroni uyayifihla imibhalo engcwele. Cishe ngonyaka weNkosi wama 35 kuya kowama 321.
U-Amaroni uyala uMormoni mayelana nemibhalo engcwele—Impi iyaqala phakathi kwamaNefi kanye namaLamani—AmaNefi amaThathu ayathathwa—Ububi, ukungakholwa, ukulumba, kanye nobuthakathi kuyanda. Cishe ngonyaka weNkosi wama 321 kuya kowama 326.
UMormoni uhola amabutho amaNefi—Igazi kanye nokufa kwabantu abaningi kushanela izwe—AmaNefi ayalila futhi akhaliswa wusizi lokulahlwa—Usuku lwabo lomusa seludlulile—UMormoni uthola izingcwephe zikaNefi—Izimpi ziyaqhubeka. Cishe ngonyaka weNkosi wama 327 kuya kowama 350.
UMormoni ushumayela ukuphenduka kumaNefi—Anqoba kakhulu futhi ayaziqhayisa ngamandla awo—UMormoni uyenqaba ukuwahola, futhi imikhuleko yakhe ewakhulekela ayinalo ukholo—INcwadi kaMormoni imema izizwana eziyishumi nambili zika-Israyeli ukuthi zikholwe yivangeli. Cishe ngonyaka weNkosi wama 360 kuya kowama 362.
Impi kanye nokubulawa kwabantu abaningi kuyaqhubeka—Ababi bajezisa ababi—Ububi obukhulu buyadlanga ngendlela engazange ibonwe ngaphambili kulo lonke elakwa-Israyeli—Abesifazane kanye nezingane baba yiminikelo yezithombe—AmaLamani aqala ukuwashanela amaNefi phambi kwawo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 363 kuya kowama 375.
UMormoni uyaphinda uhola amabutho amaNefi ezimpini zegazi nokubulawa kwabantu abaningi—INcwadi kaMormoni iyokwambulwa ukuze ikholwise bonke abakwa-Israyeli ukuthi uJesu unguKristu—Ngenxa yokungakholwa kwawo, amaLamani ayohlakazwa, futhi uMoya uyoyeka ukuhlala nabo—Ayothola ivangeli kwabeZizwe ngezinsuku zokugcina. Cishe ngonyaka weNkosi wama 375 kuya kowama 384.
AmaNefi abuthana ezweni laseKumora ukuze aqedele izimpi zokugcina—UMormoni uyayifihla imibhalo engcwele eGqumeni iKumora—AmaLamani ayanqoba, futhi isizwe samaNefi siyabhujiswa—Amakhulu ezinkulungwane abulawa ngenkemba. Cishe ngonyaka weNkosi wama 385.
UMormoni umema amaLamani ezinsuku zokugcina ukuthi akholwe kuKristu, emukele ivangeli Lakhe, futhi asindiswe—Bonke abakholwa yibhayibheli bayoyikholwa futhi neNcwadi kaMormoni. Cishe ngonyaka weNkosi wama 385.
AmaLamani athungatha amaNefi futhi ayawabulala—INcwadi kaMormoni iyovela ngamandla kaNkulunkulu—Ubumaye buyaqiniswa kulabo abakhuluma ngolaka kanye nangokulwa ngokumelene nomsebenzi weNkosi—Umbhalo wamaNefi uyovela ngosuku lobubi, lokonakala, kanye nelokuhlubuka. Cishe ngonyaka weNkosi wama 400 kuya kowama 421.
UMoroni ucela labo abangakholwa kuKristu ukuthi baphenduke—Wazisa ngoNkulunkulu wezimangaliso, onika izambulo futhi othela izipho kanye nezibonakaliso kwabakholwayo—Izimangaliso ziyaphela ngenxa yokungakholwa—Izibonakaliso zilandela labo abakholwayo—Abantu bayanxuswa ukuthi bahlakaniphe futhi bagcine imiyalelo. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
UMoroni ufingqa imibhalo ka-Etere—Umlando wesizukulwane sika-Etere ubekwa obala—Ulimi lwamaJarede aluphanjaniswa embhoshongweni waseBabele—INkosi yethembisa ukubaholela ezweni elikhethekileyo futhi ibenze isizwe esikhulu.
AmaJarede alungiselela uhambo lwawo oluya ezweni lesethembiso—Yizwe elikhethekile lapho abantu kufanele basebenzele uKristu noma bashanelwe baphele—INkosi ikhuluma kumfowabo kaJarede amahora amathathu—AmaJarede akha izikebhe—INkosi ifuna umfowabo kaJarede ukuthi asho ukuthi izikebhe zizokhanyiswa kanjani.
Umfowabo kaJarede ubona umunwe weNkosi ngesikhathi ithinta amatshe ayishumi nesithupha—UKristu ukhombisa umfowabo kaJarede umzimba Wakhe womoya—Labo abanolwazi olupheleleyo abanakuvinjelwa ukuba babone ngaphakathi kwesisitho—Izihumushi zinikiwe ukuze zembule umbhalo wamaJarede.
UMoroni uyalwa ukuthi ayigcine ilondekile imibhalo yomfowabo kaJarede—Ayizukwembulwa kuze kube abantu baba nokholo ngisho njengomfowabo kaJarede—UKristu uyala abantu ukuthi bawakholwe amazwi Akhe kanye nalawo abafundi Bakhe—Abantu bayalwa ukuthi baphenduke, bakholwe yivangeli, futhi basindiswe.
Ofakazi abathathu kanye nomsebenzi uqobo lwawo kuzokuma njengobufakazi bobuqiniso beNcwadi kaMormoni.
Izikebhe zamaJarede ziqhutshwa wumoya ukuya ezweni lesethembiso—Abantu badumisa iNkosi ngobuhle Bayo—U-Oriha uyabekwa uba yinkosi yabo—UJarede kanye nomfowabo bayafa.
U-Oriha ubusa ngokulunga—Phakathi kokugabadela kanye nokulwa, imibuso ephikisanayo kaShule kanye noKohori iyamiswa. Abaphrofethi bayabusola ububi kanye nokukhonza izithixo kwabantu, okuthe emva kwalokho baphenduka.
Kukhona ukulwa kanye nombango ngokuphathelene nombuso—U-Akishi wakha iqembu eliyimfihlo eliboshwe ngesifungo ukuthi libulale inkosi—Amaqembu ayimfihlo angakadeveli futhi aholela ekubhujisweni kwezizwe—AbeZizwe bamanje bayexwayiswa ngokumelene namaqembu ayimfihlo afuna ukuqeda inkululeko yazo zonke izindawo, izizwe, kanye namazwe.
Umbuso usuka komunye uya komunye ngokozalo, ngokuvumelena ngamacebo ngasese, kanye nangokubulala—U-Emeri wayibona iNdodana yokuLunga—Abaphrofethi abaningi bashumayela ngokuphenduka—Indlala kanye nezinyoka kuhlupha abantu.
Inkosi ingena esikhundleni senye—Amanye amakhosi alungile; amanye akhohlakele—Ngesikhathi ukulunga kuvama, abantu bayabusiswa futhi baphumeleliswa yiNkosi.
Izimpi, ukungezwani, kanye nobubi kubusa impilo yamaJarede—Abaphrofethi babikezela ukubhujiswa nya kwamaJarede ngaphandle kokuthi aphenduke—Abantu bayawenqaba amazwi abaphrofethi.
Umphrofethi u-Etere unxusa abantu ukuthi bakholwe kuNkulunkulu—UMoroni ulanda ngezimanga kanye nezimangaliso ezenziwa ngokholo—Ukholo lwenza ukuthi umfowabo kaJarede akwazi ukubona uKristu—INkosi inika abantu ubuthakathaka ukuze bathobe—Umfowabo kaJarede wasusa iNtaba iZerini ngokholo—Ukholo, ithemba, kanye nesihe kubalulekile ekusindisweni—UMoroni wabona uJesu ubuso nobuso.
U-Etere ukhuluma ngeJerusalema eNtsha eyokwakhiwa eMelika yinzalo kaJosefa—Uyaphrofetha, uyaxoshwa, ubhala umlando wamaJarede, futhi ubikezela ngokubhujiswa kwamaJarede—Impi igcwala ezweni lonke.
Ububi babantu buletha isiqalekiso ezweni—UKoriyantuma ulwa noGileyadi, kanye noLibi, futhi kanjalo noShizi—Igazi kanye nokubulawa kwabantu abaningi kugcwala izwe.
Izigidi zamaJarede ziyabulawa empini—UShizi kanye noKoriyantuma babuthela ndawonye bonke abantu emshikashikeni wokufa—UMoya weNkosi uyayeka ukusebenza kubo—Isizwe samaJarede siyabhujiswa nya—Kusala uKoriyantuma kuphela.
UMoroni ubhalela ukuthi kuzuze amaLamani—AmaNefi angenakumphika uKristu ayabulawa. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
UJesu wanika abafundi abangamaNefi abayishumi nambili amandla okunikeza isipho sikaMoya oyiNgcwele. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Amagosa abeka abaphristi kanye nabafundisi ngokubabeka izandla. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Indlela amagosa kanye nabaphristi ababusisa ngayo isidlo esingcwele iyachazwa. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Indlela yokubusisa iwayini lesidlo esingcwele iyachazwa. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Abantu abaphendukayo bayabhabhadiswa futhi kuhlanganwa nabo ngobungane—Amalunga ebandla aphendukayo ayathethelelwa—Imihlangano iqhutshwa ngamandla kaMoya oyiNgcwele. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Kwaziswa ngesimemo sokungena ekuphumuleni kweNkosi—Khuleka ngenhloso eyiyo—UMoya kaKristu wenza ukuthi abantu bazi okuhle kokubi—USathane uvumisa abantu ukuthi bamphike uKristu futhi benze ububi—Abaphrofethi babonakalisa ukuza kukaKristu—Ngokholo, izimangaliso ziyenzeka futhi izingelosi ziyasebenzela—Abantu kufanele bethembele ekuphileni kwaphakade futhi banamathele kuso isihe. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
Ukubhabhadiswa kwabantwana abancane kuyisinengiso esibi—Abantwana abancane bayaphila kuKristu ngenxa yeNhlawulo—Ukholo, ukuphenduka, ubumnene kanye nokuthoba kwenhliziyo, ukwamukela uMoya oyiNgcwele, kanye nokubekezela kuze kube sekugcineni kuholela ensindisweni. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401 kuya kowama 421.
AmaNefi kanye namaLamani bonakele futhi baphuphile—Bazwisana ubuhlungu futhi bayabulalana—UMormoni ukhulekela ukuthi umusa kanye nobuhle kuhlale kuMoroni ingunaphakade. Cishe ngonyaka weNkosi wama 401.
Ubufakazi beNcwadi kaMormoni buza ngamandla kaMoya oyiNgcwele—Izipho zikaMoya zabelwa abathembekileyo—Izipho zomoya njalo zihambisana nokholo—Amazwi kaMoroni akhuluma esuka othulini—Wozani kuKristu, pheleliswani Kuye, futhi ningcwelise imiphefumulo yenu. Cishe ngonyaka weNkosi wama 421.